Ebe A Na-Ere Ihe, Ebe A Na-Ere Ihe, Ụlọ Akwụkwọ
Ebe A Na-Ere Ihe, Ebe A Na-Ere Ihe, Ụlọ Akwụkwọ Site n'aka ụlọ ọrụ mpaghara iji mepụta ụlọ ahịa akwụkwọ ntanetị ga-ejigide, ọrụ zuru oke na obere mpempe ụkwụ, RED BOX ID jiri echiche nke 'akwụkwọ mepere emepe' iji chepụta ahụmịhe ọhụụ nke na-akwado obodo. Dị na Vancouver, Canada, Akwụkwọ Worldmụaka Kidswa bụ ụlọ ebe a na-ere ihe mbụ, ụlọ ahịa azụmaahịa nke abụọ, yana ụlọ ahịa n'ịntanetị. Ihe di iche, ihe nlere, uda na ogho nke agba na-adọta ndi mmadu n’ime, ma mebe oghere di egwu ma di egwu. O bu ezigbo ihe omuma banyere uzo esi eme ka echiche ahia di elu site na ime ulo.
Mmeghari Ohuru Nke Obodo Mepere Emepe
Mmeghari Ohuru Nke Obodo Mepere Emepe Square Tahrir bu udiri azumahia nke akuko ochichi nke ndi Egypt ma ya mere itughari ime obodo ya bu ochichi obodo, gburugburu ya na ndi mmadu. Atụmatụ onye nwe ụlọ gụnyere imechi ụfọdụ okporo ụzọ yana jikọtara ha na mpaghara enweghị nsogbu iwere okporo ụzọ. Emeziri ihe omume atọ iji kwado ntụrụndụ na azụmaahịa yana ihe ncheta iji gosipụta ọhụụ ọchịchị Egypt nke oge a. Atumatu a choro uzo zuru oke iji dozie ma dokwaa ma nwekwaa uzo elu-acha akwụkwọ ndụ iji gosiputa agba n’obodo.
Oha Ihu Ọha
Oha Ihu Ọha Ihe mkpalite imewe a bụ mmetụta maka ịdị mfe na nghọta nke mkpachapụrụ anya nke Mondrian na akara ngosipụta site na imetụ akparamagwa na ịdị adị nke akpọrọ akpọpọ Square Kufic. Ihe osise a bụ ngosipụta nke njikọ ọnụ n'etiti uwe na-akwado ozi ahụ na enwere ike ịgwakọta ụdị dị iche iche yiri ka ọ na-emegiderịta onwe ha ebe ha na-egwu ala n'ime usoro amamihe dị n'azụ ha, a ga-enwe myirịta nke ga-eme ka ọrụ art na na-adọrọ adọrọ karịa nghọta doro anya.
Ụlọ Ihe oru ngo a bu oru ngo nke obodo a di n’ime [SAC Beigan Hill International Arts Centre] n’ogbe Shanghai, enwere ulo oru ihe ime obodo, na-enye otutu ihe omume, Villa nwere ike ibu onodu ma obu ulo ihe omuma ma obu ulo, ndi n’oru ime obodo nwere oke ọdọ , Ihe nlereanya a dị n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ. Ihe pụrụ iche nke ụlọ ahụ bụ oghere ime ụlọ n’enweghị kọlụm ọ bụla, nke na-enye mgbanwe kachasị ukwuu na okike n’ime imewe ohere ime ụlọ, kamakwa n’ihi nnwere onwe na mgbanwe nke oghere, ihe dị n’ime ụlọ, usoro nke imepụta ihe na-agbanwe agbanwe, ihe joometry na-agbasawanye. na -emepụta ohere dị n'ime, yana kwekọrọ n'echiche okike nke [Art Center] na-agbaso. Structuredịrịrị akụkụ dị larịị na akwa steepụ dị n'etiti mbara ime ụlọ, ebe akụkụ aka ekpe na aka ekpe na-agbawa ọkwa, yabụ ngụkọta ọnụ ụlọ ime ụlọ ise dị iche iche na-ejikọ oghere.
Ụlọ Ọrụ Na-Ahụ Maka Ụlọ Dị ka "Dance nke Ribbon", na-enwe oghere sara mbara, oghere n'ozuzu ya na-acha ọcha, na-eji echiche nke ịdebe arịa ụlọ, na-eme ka mmekọrịta na-ejikọ oghere, nke kachasị mkpa bụ mmekọrịta dị n'etiti mgbidi na kabinet, iwekota Oche nwere okpukpo okpueze na ala, tufuo nkebi site na irighiri akwara jọlọjik, ọ bụghị naanị ikpuchi oke nke ntụpọ ahụ kamakwa gosipụta echiche nke oge a, na-egosi echiche dị nkọ nke rịbọn site n'echiche nke ìhè.
Ebe A Na-Ere Ihe, Ebe A Na-Ere Ihe, Ụlọ Akwụkwọ Mmeghari Ohuru Nke Obodo Mepere Emepe Oha Ihu Ọha Ụlọ Ọrụ Na-Ahụ Maka Ụlọ Ụlọ Ụlọ Ọrụ Na-Ahụ Maka Ụlọ